Ogaden News Agency (ONA) – Faah Faahin Kusaabsan Qaraxii Kadhacay Hotel SYL ee Muqdisho.
Faah Faahin Kusaabsan Qaraxii Kadhacay Hotel SYL ee Muqdisho.
Posted by ONA Admin	/ August 31, 2016
Khasaaraha dhimada ee ka dhashay weerarkii ka dhacay Hotel ku dhaw Madaxtooyada Villa Soomaaliya magaalada Muqdisho ayaa kor u kacdey.
Sida ay wararku sheegayaa ugu yaraan 22 qof ayaa ku geeriyootey qaar kale oo badana waa ku dhaawacmeen, kadib markii gaadhi nooca Daynaha ah lagu weeraray Hotel aan wax badan ka fogeyn Madaxtooyada Villa Somalia. Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji oo ah madaxa gargaarka deg-dega ah ayaa warbaahinta uxaqiijiyey in 22 qof geeriyootey kuwaas oo 6 amid ah ay yihiin dumar.
Hotelka SYL waxaa shir ku lahaa siyaasiyiinta ka soo jeeda Somaliland kuwaas oo ka hadlayey shirka madasha dhawaan uga furmaya magaalada Muqdisho. Waxaa kamid ahaa masuuliintii hotelka ku sugnaa xiliga qaraxu ka dhacay Wasiirka Warfaafinta, Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, Wasiirka Dakadaha iyo Gaadiidka Badda, Nuur Faarax Xirsi, iyo Wasiiru dowlaha Gaashaandhigga Maxamed Cali Xaga Waxaa sidoo kale weerarkan ku dhaawacmey Xildhibaano iyo Suxufiyiin dhawr ah.
Weerarkan waxaa sheegtey ururka al-Shabaab, waaana weerarkii labaad oo ay ku fuliyaan gaadhi noociisu yahay Dayne, 21 Agoosto ayey ahayd markii gaadhi nooocan oo kale ah oo bom lagu xidhey ay ku weerareen Suuqa Dayax ee magaalada Gaalkacyo.